Kyaw Zay Ya » Oh..Our famous Myanmar Blogger’s Wedding
Kyaw Zay Ya Random Of My Life October 26th, 2009
5 Oh..Our famous Myanmar Blogger’s Wedding Myanmar famous blogger is married. Who it is? Do you want to know? See it below invitation letter. Wedding show in on 28-10-2009(Wed). We will going to her wedding in that day and I will post about wedding, photos on my blog come and see again. Our spinster is now getting to married Wish you happily ever after with your husband Ma Nine Nine SaNay.
Tweet This Post nineninesanay's wedding « World first web Server and Browser.
ဝက်ဝံလေး says:	October 26, 2009 at 8:34 pm	တခုလောက် မေးချင်ပါတယ် ဘာလို့ ဘလော့ဂ်ပေါ် တင်တာလဲ ဟင် မစနေ က ရော အဲလို တင်ခိုင်းပါသလား မ စနေက အဲလိုတင်ခိုင်းတယ် ဆိုရင်တော့ ထားပါလေ ဒါပေမယ့် မထင်ဘူး မစနေ က တို့ကိုတောင် မပြောပါနဲ့ ပိတ်ထားတာ အရမ်းသိချင်ပါတယ် ဘာလို့များ ဘလော့ဂ်ပေါ်တင်လိုက်သလဲ ဆိုတာကို ပြန်ပြောပေးမယ် လို့ထင်ပါတယ်နော်
Reply	amayarko says:	October 26, 2009 at 8:39 pm	သတို.သမီးလေးက မနိုင်းနိုင်းစနေလား ။ ဝမ်းသာပါတယ်မရေ ။ ယနေ့ကစ နှစ်တစ်ရာတိုင် အိုအောင်မင်းအောင် ထာဝရပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေနော် ။
Reply	amayarko says:	October 26, 2009 at 8:41 pm	သတို.သမီးလေးက မနိုင်းနိုင်းစနေလား ။ ဝမ်းသာပါတယ်မရေ ။ ယနေ့ကစ နှစ်တစ်ရာတိုင် အိုအောင်မင်းအောင် ထာဝရပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေနော် ။
Reply	ကြည် says:	October 26, 2009 at 9:52 pm	ဟယ် နိုင်းနိုင်းစနေစွံပြီဟေ့…၀မ်းသာလိုက်တာ။ သတင်းကောင်းပဲ။ နိုင်းနိုင်းစနေတို့ လင်မယား အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေ။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Protected by WP Anti Spam	May 2013